I-US, i-UK, iFransi kunye neJamani zibongoza abemi bazo ukuba bashiye i-Ethiopia ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Ethiopia eziQhekezayo » I-US, i-UK, iFransi kunye neJamani zibongoza abemi bazo ukuba bashiye i-Ethiopia ngoku
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase-Ethiopia eziQhekezayo • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ungquzulwano olukhoyo ngoku lwaqhambuka kuMntla we-Ethiopia kunyaka ophelileyo, xa urhulumente wobumbano waqalisa iphulo lomkhosi ngokuchasene neqela labavukeli, iTigray People's Liberation Front (TPLF).
Phakathi koloyiko lokuqhubela phambili abavukeli kwikomkhulu laseTopiya, Addis Ababa, oorhulumente abaninzi baseNtshona babongoza abemi babo ukuba bayishiye i-Ethiopia ngokukhawuleza.
Isebe lezangaphandle laseJamani kunye ne-ambassy yase-France e-Addis Ababa bakhuphe ingxelo eyahlukileyo namhlanje becebisa nabani na wabemi belizwe ukuba bahambe ngaphandle kokulibazisa. I-US kunye ne-United Kingdom kutshanje bakhuphe iingcebiso ezifanayo kubemi bazo.
The IZizwe eziManyeneyo (UN) iphinde yaqinisekisa ukuba isebenzela 'ukufudusa okwethutyana' amalungu osapho lwabasebenzi bayo bamazwe ngamazwe besuka e-Ethiopia ngenxa yokuwohloka kwemeko yokhuseleko emhlabeni.
Ekuqaleni kwale nyanga, abasebenzi base-Ethiopia abangama-22 babanjwa bavalelwa yimikhosi karhulumente ngexesha logqogqo Addis Ababa kujoliswe kwiiTigrayans zobuhlanga, i-UN yatsho. Abanye bakhululwa kamva.
Eli qela, ebelilawula ilizwe iminyaka ngaphambi kokuba ligxothwe ngo-2018, kwiinyanga zamva nje likwazile ukuphinda lilawule uninzi lommandla osemantla weTigray, kubandakanya nekomkhulu layo iMekele. NgoLwesibini, iTPLF ithe iluthabathile ulawulo lweShewa Robit kwaye iqhubela phambili Addis Ababa, malunga neekhilomitha ezingama-220 (iikhilomitha ezili-136) ukusuka apho.